Ahoana no anaovana ny taratasy fasika - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana no anaovana ny taratasy sandbara
Ity taratasy rehetra ity dia mandeha amin'ny tionelina maina.
Apetraka eo amboniny ny resina artifisialy mba tsy hivaha ireo kristaly ary avelantsika ho maina indray izy ireo.
Amin'ny farany, ny taratasy dia cora amin'ny horonan-taratasy mifanaraka amin'ny habeny, avy eo mandroso amin'ny haben'ny takelaka tadiavintsika.
Inona no dikan'ny fanisan-taratasy?
Ity isa ity dia ny haben'ny kristaly. Tena isan'ny meshes isaky ny santimetatra toradroa
Arakaraka ny meshes amin'ny iray santimetatra ny finer dia ho
Andao alao sary an-tsaina ny iray metatra toradroa, manodidina ny 2,5 × 2,5 cm. izay misy meshes 5 x 5, raha toa ka arahinay izay rehetra tsy raraka, dia mankany amin'ny takelaka P5 izy io, zavatra maditra be. Izay nandalo sivana dia handalo amin'ny iray hafa isika. Andao alao sary an-tsaina ny 110 × 10 harato, amin'ny taonina izay rehetra tsy voasivana dia an'ny valiha P10 ary inona no mitranga dia arovantsika indray
Mba hiasa tsara amin'ny takelaka fanosotra dia tsara raha aforeto eo ambonin'ny tapa-kazo ny takelaka.
Fomba fanamboarana tantely ao anaty siny fitaratra
Fanehoan-kevitra 1 momba ny "Ahoana no anaovana ny takelaka"
19 Aogositra 2019 amin'ny 6:43 hariva
Inona ny voam-pasaka? vera, vera sa ahoana no fikosohanao?